DAAWO-Guddoomiyaha barlamaanka Puntland oo si kulul ula hadlay beeshiisa kuna eedeeyey inaysan ka qayb qaadan dhismaha wadada Ceel-daahir.
October 25, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 2
Guddoomiyaha barlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ka hadlay dhismaha wadada Ceel-daahir iyo Ceerigaabo ayaa shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadasi oo noqday mid daba dheeraaday.
“Waxaan dhammaan dadweynaha Puntland ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dhammaystirka mashruuca wadada Ceel-daahir iyo Ceerigaabo iyo dhammaan mashaariicda kale ee ka socda Puntland” ayuu yiri Jibriil.
Dhanka kalena, guddoomiyaha ayaa sheegay in shacabka gobolada Sanaag iyo Haylaan aysan kaalintii looga baahnaa ka qaadan dhismaha wadadaasi loona baahan yahay inay lahaansho muujiyaan doorkoodana qaataan.
“Waxaan si gaar ah ugu baaqayaa shacabka gobolada Sanaag iyo Haylaan inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaasi maadaama uusan muuqan doorkoodii oo ah midka ugu muhiimsan ee dhismaha wadadaasi” ayuu yiri markale guddoomiyaha barlamaanka Puntland.
kuwa Warsengeli oo meeshaan habeen iyo maalin dadka ku aflagaadeeyo ha la hadlo in eey hadal dadka wax uga qaadeynin eey dadkooda wax ha u taraan. KKKKKKK
Wadani ani wali meeshaan ruux warsangeliya maan ku arkin maxaa beenta ku faleysaa? Webkaan hal qof oo beeshaas ah hadal muusan ka dhiiban.
Saasoo ay tahay guddoomiyahu run buu sheegay 100% maxaa yeelay warsangeli iyo dhulbahante ayakaa dhulkooda dhisan waayey oo dawladda Puntland wax kasta ku sugaaya. Waxbo ma is taraan hadana mj yay dayacooda ku eedeeyaan.